Samachar Batika || News from Nepal » से’क्स भन्दा पनि मन पर्ने महिलालाई के हो थाहा पाउनुहोस ?
से’क्स भन्दा पनि मन पर्ने महिलालाई के हो थाहा पाउनुहोस ?
से’क्स महिला–पुरुष दुबैका लागि निकै आवश्यक तत्व हो । से’क्ससँग सम्बन्धित थुप्रै अनुसन्धानहरु प्रकाशित पनि भइसकेका छन् ।
अनुसन्धानले नै महिलाले भन्दा पुरुषहरुले से’क्सको बारेमा बढि सोच्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तैमा महिलाहरुको से’क्स व्य’वहार सम्बन्धि अर्को एउटा सर्वेक्षण गरिएको छ जसका अनुसार ६ जनामध्ये एक महिला आफूलाई मन परेको केक खानका लागि शारिरक स’म्बन्ध बनाउन चाँहदैनन् ।
डेली स्टारको रि’पोर्ट अनुसार आफूलाई मन परेको केकका लागि महिलाहरु र’क्सी पिउन र १३ प्रतिशत महिलाहरु मोबाइलको प्रयोग गर्न बन्द गर्ने गर्दछन् । यो अनुसन्धान २,२०० महिलाहरु बिच ‘नेशनल केक विक’ को दौरान गरिएको हो ।
६ जनामध्ये एक महिला आफूलाई मन परेको केक खानका लागि शारिरक स’म्बन्ध बनाउन चाँहदैनन् ।
यस्तैमा ११ प्रतिशत पुरुषहरु आफ्नी प्रेमिकाको मन जित्नका लागि केक नै पहिलो रोजाई हुने बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति ३ चैत्र २०७६, सोमबार ०६:०२